Facebook တွင် လူများနှင့် app invite များကို block ပြုလုပ်ခြင်း - .::just for share::.
Home » facebook » Facebook တွင် လူများနှင့် app invite များကို block ပြုလုပ်ခြင်း
Facebook တွင် လူများနှင့် app invite များကို block ပြုလုပ်ခြင်း
Facebook သည် မိတ်ဆွေဟောင်းများကို ရှာဖွေခြင်း၊ မိတ်ဆွေသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း စသည့် လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတွင် အားနည်းချက်များရှိသည်။
Facebook သုံးစွဲသူများသည် အကြောင်းအရာ အသေးအဖွဲ ကိစ္စရပ်များကိုပင် status update တင်သူများနှင့် တွေ့ကြုံနိုင်သလို မပြီးဆုံးနိုင်သည့် app နှင့် event invite များကဲ့သို့သော စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာများနှင့်လည်း ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် Facebook တွင် လူများနှင့် app invite များကို တားဆီးပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းအား ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
လူများကို block ပြုလုပ်ခြင်း
Facebook စာမျက်နှာ၏ အပေါ် ညာဘက်ရှိ သော့ခလောက်ပုံစံ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသည့် Privacy Shortcuts menu တွင် မိမိ၏ post ကို မြင်တွေ့စေလိုသူများအား အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲနိုင်သလို post များတွင် comment ပေးသူများကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် မိမိကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည့် လူများကိုလည်း အလျင်အမြန် block နိုင်သည်။
“How do I stop someone from bothering me” option ကိုနှိပ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသူ၏ အမည် သို့မဟုတ် email လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပြီး block လုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် Facebook က သုံးစွဲသူများကို အကြောင်းကြားမည် မဟုတ်ပါဘူး။ Block ပြုလုပ်ခံရသူ အနေဖြင့် block ပြုလုပ်သူ၏ profile ကို မမြင်ရတော့သလို message ပြုလုပ်ခြင်း၊ comment ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင် သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေသည့်သူများကိုလည်း အရင်ဆုံး unfriend ပြုလုပ်ပေးသည်။
app များနှင့် invite များကို block ပြုလုပ်ခြင်း
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို block မလုပ်ချင်သလို မိမိတင်လိုက်သည့် post များကိုလည်း မမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Settings menu ထဲက Blocking section တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Blocking section > Restricted list တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီ၏ အမည်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ၎င်းစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံထားရသူများသည် post များကို public ဖြင့် ဝေမျှမှသာ ဝေမျှသူ၏ အချက်အလက်များကို မြင်တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လူနာမည်နှင့် restrict မလုပ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ app တွေကို block လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Blocking section > Block apps တွင် invite များကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည့် app အမည်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေမည့် invite များ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာတော့မည် မဟုတ်ပေ။